Fianakaviana avy any atsimo lasa nanana tohi-bely kokoa | UNICEF Madagasikara
Fianakaviana avy any atsimo lasa nanana tohi-bely kokoa
Iray amin’ireo mpandray anjara tamin’ny fandaharan’asa Toseke Vonje Aigne izay azo adika hoe « Fanampiana ho famonjena aina » tany amin’ny faritra atsimon’ny nosy i Voafide, renim-pianakaviana, tsy manam-bady, 32 taona, mamelona zaza 3 , monina ao Andrimbozo, Kaominina Ifotaka, any atsimon’i Madagasikara. Noho io fandaharan’asa io dia afaka nisitraka fanampiana 80 000 Ariary izy, izany hoe 22 Dolara isam-bolana izay tohanan’ny UNICEF, ary nandray anjara amin’ny fiatrehana ny filàna andavan’andron’ny ankohonany, indrindra ny lafin’ny ara-tsakafo. « Lasa natanjaka kokoa izahay eo am-piatrehana ny hain-tany izay tena tsy fahita tokoa tamin’ity taona ity, » hoy izy. « Mpamboly aho ary nanampy trotraka ny fahasahiranana efa niainanay ny tsy fahampian’ny orana tamin’ity taona ity. Noho izany dia tsy afaka namboly aho, » hoy izy nizara taminay.
« Tena mankasitraka ny UNICEF aho satria raha tsy nisy io fanampiana io dia tena nampivarahontsana tokoa ny zavatra niseho. Afaka nividy vary, katsaka, tsaramaso maina, anana sy ireo zavatra ilaina amin’ny fiainana andavanandro aho toy ny savony sy menaka. Afaka misakafo tsara ireo zanako 3 ary afaka nividy fitaovam-pianarana ho an’ireo zanako roa vavy, Sarobidy sy Kazy – 9 taona sy 6 taona koa aza aho.
« Mivarotra kitay aho amin’izao fotoana izao kanefa tsy mahavelona io asa io noho ny fahavitsian’ny mpanjifa etsy andaniny ary betsaka ihany koa no manao azy ho asa fivelomana etsy ankilany.
Tsy manana fidiram-bola hafa aho ary miankina tanteraka amin’io fanampiana io aloha izahay ankehitriny. Nanamaivana ny adin-tsainay io fanampiana io, indrindra moa eo amin’ny lafiny ara-tsaina satria isam-bolana dia manana fanantenana izahay fa na dia ao anatin’ny kirizy aza dia afaka mandray fanampiana tsy tapaka. »
Maniry hatrany ny fitohizan’ilay fanampiana izy satria dia tsy afaka ny ho velona ao anatin’ny toe-javatra toy izao izy sy ny zanany; tsy misy ny orana ka tsy azo vinavinaina noho izany ny hiasàna ny tanimboly.
Ny fandaharan’asa Toseke Vonje Aigne dia manohana ireo tokantrano ao anaty vonjy taitra amin’ny lafin’ny maha-olona mba hiatrehan’izy ireo ny haintany any atsimo, izay tohanan’ny Foreign, Commonwealth and Development Office ara-bola.